कसलाई मन हुदैन र जवान भैरहन , यी हुन् जवान देखिने सूत्र हेर्नुहोस् - Mitho Khabar
April 12, 2020 mithokhabarLeaveaComment on कसलाई मन हुदैन र जवान भैरहन , यी हुन् जवान देखिने सूत्र हेर्नुहोस्
१.तपाईंको आँखीभौँ भद्दा र गलत सेपको छ भने त्यसलाई ट्रिम गरेर नयाँ लुक दिनुहोस् । तपाईं आफ्नो उमेरभन्दा केही कम देखिनुहुनेछ ।
२.हरेक दिन अनुहार,हात र घाँटीमा मोइस्चराइज गर्नुहोस् । त्यसले तपाईंको छालालाई ताजा र स्वस्थ देखाउँछ ।
३.निद्रा पूरा गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा तपाईंको शरीरले आराम र पुनर्ताजगी पाउनेछ । निद्राको कमीले मानिसलाई चाँडै बुढ्यौलीर्फ लैजान्छ । त्यसैले दैनिक ८ घन्टा सुत्नुहोस् ।
४.शरीरमा सुगरको मात्रा बढ्यो भने समस्या धेरै आउँछ । चाउरीपन बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सुगरको मात्रा कम गर्नुहोस् । मिठाइ,सोडाजस्ता खाद्यान्न नखानुहोस् ।
५.भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा पर्याप्त खानुहोस् । तपाईंको दैनिक खाद्यान्नमा ७५ एमजीबराबर भिटामिन सी समावेश हुनु आवश्यक छ । दुईवटा मध्यम साइजका सुन्तलामा योबराबर मात्रा पाइन्छ । तपाईंको उमेर र तौल हेरेर भिटामिन सीको प्रयोग योभन्दा बढी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले चाउरीपन बढ्नबाट जोगाउँछ ।
६.दाँतलाई सधैँ सेतो राख्नुहोस् । राम्रो टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहोस् । चम्किलो र सेतो दाँतले तपाईंलाई हँसिलो र युवा देखाउँछ ।
७.चिया र कफीले तपाईंको दाँतमा असर गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले यसको सेवन कम गर्नुहोस् ।
८.तपाईंको खुट्टा र हातले पनि तपाईंको उमेरमा फरक पार्छ । त्यसैले हात–खुट्टा सधैँ सफा र टिपटप राख्नुहोस् ।
९.नियमित आँखाजाँच गर्नुहोस्,किनकि तपाईंले थाहा नपाई तपाईंको आँखाको शक्ति बिस्तारै कम हुँदै गएको हुन सक्छ ।
१०.तपाईंको छालामा खैरो दाग तथा चाया,पोतो देखिएको छ भने त्यसको प्राकृतिक उपचार सुरु गर्नुहोस् । कागतीको जुसमा हल्का पानी मिसाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । कागतीले ब्लिचको काम गर्नुका साथै बिस्तारै तपाईंका दागहरूलाई कम गर्दै लैजान्छ ।
११.लाइट कलरको आइस्याडो लगाउँदा तपाईंको आँखा चम्किलो देखिन्छ । यसले तपाईंलाई भर्खरको देखाउँछ । तर,चम्किलो देखाउने नाममा कडा केमिकलयुक्त आइस्याडोको प्रयोग गर्नुभयो भने चाउरीपन बढ्ने खतरा रहन्छ ।
१२. लाइट कलरका पोसाकले तपाईंलाई भर्खरको देखाउँछ । तर, कपडाको चयन गर्ने विषय तपाईंको व्यक्तिगत हो । कपडा छान्दा आफूलाई कस्तो सुहाउँछ,त्यही आधारमा छान्नुहोस् ।
१३.सुत्ने वेलामा मेकअप हटाउनुहोस् । स्वस्थ रहन र ब्लक भएका पोर्सहरू खोल्न पनि मेकअप हटाउनु जरुरी छ । दिनभरि तपाईंको छालामा जम्मा भएका प्रदूषण मेकअप नपुछेको खण्डमा जस्ताको तस्तै रहन्छन् र तपाईंको छालालाई ड्यामेज गर्छन् ।
१४.जवान देखिने अर्को उपाय हो,प्राकृतिक उत्पादनहरूको प्रयोग । ओलिभ,नरिवल,स्विट आल्मन्डलगायत तेलले राम्रो मोइस्चराइजर,क्लिन्सर र अलराउन्ड ब्युटीको काम गर्छन् ।
१५.लिपस्टिक छनोट गर्दा ध्यान दिनुहोस् । विनामेकअपमा डार्क लिपस्टिक प्रयोग गर्दा तपाईं उमेरभन्दा बढीको देखिनुहुन्छ भने लाइट लिपस्टिक प्रयोग गर्दा भर्खरको । त्यसैले चम्किलो र लाइट लिपस्टिकको प्रयोग गर्नुहोस् ।
१६.हेयरस्टायललाई सधैँ नयाँ लुक दिनुहोस् । तपाईंले १० वर्षअघि जस्तो हेयर स्टाइल बनाउनुहुन्थ्यो,अहिले पनि त्यस्तै बनाउनुहुन्छ भने सोच्नुहोस् र परिवर्तन हुर्नुहोस् । फेसन र स्टायल परिवर्तन भइरहन्छन् । तर,धेरै मानिस आफ्नो जीवनको अधिकांश समय पुरानै हेयरस्टायलमा रमाउँछन् । हेयरस्टाइलमा परिवर्तन गर्दा तपाईं भर्खरको मात्रै देखिनुहुन्न,आफ्नो आत्मविश्वास पनि बढेको अनुभव गर्नुहुनेछ ।
१७.पर्याप्त पानी सेवन गर्नुहोस् । पानीको कमीले तपाईंको छाला र कपाललाई उमेरभन्दा बढी देखाउँछ । यस्तो समस्याका साथै विभिन्न रोगबाट बच्नका लागि पनि पर्याप्त पानी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै,पानी तपाईंको तौल घटाउनमा पनि सहायकसिद्ध हुन्छ ।
१८.उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको हाँसो कम हुँदै जान्छ । तर, सामान्य हाँसो र सकारात्मक सोचले तपाईंको अनुहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । हाँसोले तपाईंको अनुहारका नसालाई आराम दिन्छ र चिउरीपन कम गर्छ । त्यसैले, तपाईं युवा हुँदा जुन स्पिरिटमा हाँस्नुहुन्थ्यो,त्यसरी नै हाँस्नुहोस्,खुसी रहनुहोस् ।
१९.परफ्युम र वडीस्प्रे छनोट गर्दा ध्यान दिनुहोस् । केही परफ्युम यस्ता हुन्छन्,जसको सुगन्धबाट मानिसले तपाईंलाई भर्खरको ठान्नेछन् । त्यसैले छोरीले प्रयोग गर्ने परफ्युम प्रयोग गर्नुहोस् ।
२०.जवान हुनु भौतिक कुरा मात्रै होइन,सोचाइको कुरा पनि हो । तपाईंले आफूलाई जवान महसुस गर्नुभयो भने अरूले पनि तपाईंलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छन् । तपाईंलाई जवान देखिनका लागि सर्जरीकै आवश्यकता छ भन्ने होइन । सर्जरी गरिसकेपछि पनि तपाईंको विचार पुरानै रह्यो भने तपाईं जवान रहनुहुन्न ।
तपाईको भाग्यमा सरकारी जागिर छ कि छैन ? हत्केलाको यो रेखा हेरेर पत्ता लगाउनुहोस्…
आँचलको विवाहमा किन गएनन पल, फ्यानलाई दिए यस्तो जवाफ ( भिडियो हेर्नुस् )
June 21, 2020 September 13, 2020 Suman Pandey